ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: လူ့ အခွင့်အရေးလား ကုလားအခွင့်အရေးလား ၆
လူ့ အခွင့်အရေးလား ကုလားအခွင့်အရေးလား ၆
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိမ်များ မီးရှို့ခံရစဉ်
ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၃) ကို ဒီနေရာတွင် နှိပ်၍ ပြန်လည် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
နောက်တခုပြောချင်တာက ကျနော်တို့ဟာ လူကိုလူလို့ မြင်တတ်တဲ့ တရားကိုလက်ကိုင်ထားကြသူတွေပါ။ သို့သော် လူတဦးချင်းအနေနဲ့ပဲကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်အပေါ်ကို လာရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်ပြီးနောက် အိမ်ရှင်ကိုမင်းတို့ထွက်သွားဆိုပြီး မောင်းထုတ်မယ်။ သားသမီးတွေကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်မယ်။ ဘယ်လိုပဲစိတ်ထားစေတနာကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့သူကမှ ဒါမျိုးတော့ လက်ခံမှာမဟုတ်သလို သင့်တော်တဲ့ တုန့်ပြန်မူလုပ်မှာပါပဲ။ မိတ်ဆွေအရင်းအချာ ချင်းတောင်မှ အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့အခါ အိမ်ရှင်ဆိုတာအသိအမှတ်ပြုရတယ်။
လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ကျင့်ကြံပြောဆိုပြုမူကြရတယ်။ လေးစားမှုတွေပေးကြရတယ်။ ယခုတော့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ လိုက်လျောညီထွေစွာ နေတတ်ကြရမှာဖြစ်ပေမယ့် ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲ အခုလိုဘယ်နိုင်ငံကမှလက်မခံချင်တဲ့ အခြေအနေဆိုက်သွားတာပါ။ ဒီလိုသာ ပုံကြီးချဲ့တာတွေနဲ့ မှားယွင်းစွာ ကူညီိနေကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိူင်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ မိသားစုအတွင်းမှာတောင် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရှိကြရဲ့လားလို့ လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေ အရင်ဝင်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
သတင်းတခုဖြစ်တဲ့ သြစတြေးလျဝန်ကြီးချူပ် ဂျုလီယာဂျီလပ် ရဲ့ စကားလေးကိုတော့ လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေ အတွက် အစာရှာရာလမ်းကြောင်းတခု တွေ့လိုတွေ့ငြား ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society . Learn the language!Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, butafact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.We will accept your beliefs, and will not question why All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.
“ကျွန်မတုိ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုပဲ အဓိကပြောပါတယ်။ စပိန်၊ လက်ဘနွန်၊ အာရပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှားနဲ့ အခြား ဘာသာစကားတွေ မပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရှင်တို့ ကျွန်မတို့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အပါအ၀င် ဖြစ်ချင်တယ်ဆို ရင် ဒီဘာသာစကားကို သင်ကြားပါ။ သြစတြေးလျလူမျိုး အားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြပါတယ် ခရစ်ယန်တချို့တလေကြောင့် လင်္ကျာ ၀ါဒီကြောင့်၊ နိုင်ငံရေးနှိုးဆော်ချက် စတာတွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး၊ ခရစ်ယန်အမျိုးသား အမျိုးသမီးအများက ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကို ခရစ်ယန်အယူဝါဒအပေါ် အခြေပြုကာ ထူထောင်ခဲ့ကြကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာကမ္ဗည်းအက္ခရာ တင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်မတို့ရဲ့ စာသင်ခန်းနံရံတွေမှာ ဖေါ်ပြထားနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်လျော်မှာပါ။ ဘုရားသခင်နဲ့ သင်အဆင်ပြေဖို့ မရှိဘူးဆိုရင် သင်ရဲ့ အိမ်ရာသစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အခြား တစ်နေရာမှာသာ စဉ်းစားပါတော့လို့ ကျွန်မ အကြံပေးပါရစေ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်မတို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမို့လို့ပါဘဲ။ ကျွန်မတို့ဟာ သင်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကိုလက်ခံပါတယ် ဘာညာ မေးခွန်းထုတ်နေမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူုး။”
“ကျွန်မတို့တောင်းဆိုနေတာ တစ်ခုလုံးက သင်လည်း ကျွန်မတို့ယုံကြည်ချက်တွေကို လက်ခံဖို့ ကျွန်မတို့နဲ့ အတူတကွ အေးအေးချမ်းချမ်း အဆင်ပြေပြေနေထိုင်သွားကြဖို့ပါဘဲ၊ ဒါဟာ ကျွန်မတုိ့ရဲ့တိုင်ပြည်၊ နယ်မြေ၊ နေထိုင်မှုပုံစံပါ။ အဲဒီ ခံစားစံစားခွင့်အားလုံးကို သင်တို့ကို ကျွန်မတို့ က ပေးအပ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်က ကျွန်မတို့ရဲ့ အလံ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဓိဋ္ဌာန်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခရစ်ယန်အယူ သို့မ ဟုတ် ကျွန်မတို့ရဲ့ လူနေမှုဘ၀ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ငြင်းခုံလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မအလေးအနက် အားပေး ချင်တာက သြစတေးလျသားတို့ရဲ့ အခြားသော လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ထွက်ခွာသွားနိုင်ခွင့်” ကို ရယူလိုက်ကြဖို့ပါပဲ။ သင် ဒီမှာမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင် ပြန်သွားပါ။ ကွန်မတို့ သင့်ကို အတင်းလာခိုင်းခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူုး၊ သင်ကသာ လာနေပါစေလို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကို သင်ကလည်း လက်ခံပေးပါ။ ပြည်ပက လာရောက်နေထိုင်သူတွေကသာ အသားကျအောင် လုပ်ရမှာလေ။ သြစတြေးလျသားတွေက လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ နေချင်နေ မနေချင်ရင် ထွက်သွား”
(သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် ဂျုလီယာဂျီလပ်ရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုနဲ့ ရပိုင်ခွင့် အပေါ် သဘောထား)
အပိုင်း (၅) ကို မနက်ဖြန်တွင် စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.photayokeking.org မှ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။